जीवन – Page6– Health Post Nepal
जाडोमा स्वस्थ रहने ७ तरिका
आठ आनीबानी, जुन २० को उमेरमा जरुरी छ
स्वस्थ कसरी रहने ? यो धेरैको जिज्ञासा हो । यदि तपाईंलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी एकतर्फी सुझाब मात्र दियो भने यो अपूरो हुन सक्छ । महत्वपूर्ण कुरा, खासगरी तपाईं २० को उमेर (२०–२९ वर्ष)मा सचेत रहनुभयो भने यो जीवनभरि स्वास्थ रहने उत्तम...
ड्राईफ्रुटले बढाउँछ शुक्रक्रीटको क्षमता र संख्या
बीबीसी– नियमित रूपमा बदाम, ओखर, काजु, पेस्ताजस्ता ड्राइफ्रुट खाँदा पुरुषमा स्वस्थ शुक्रकीट उत्पादन बढ्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । १४ हप्तासम्म दैनिक दुई मुट्ठी बदाम, ओखरको दिउल र हेजलनट सेवन गरेका पुरुषमा शुक्रकीटको कुल संख्या बढेको र तिनमा भरिला...
अधिकांश महिलालाई गर्भवती अवस्थामा कस्तो खाना खाने भन्ने दुविधा हुने गर्छ । किनकि, यस्तो अवस्थामा दुई व्यक्तिका लागि पोषकतत्व पुग्नुपर्ने हुन्छ । अर्काे महत्वपूर्ण कुरा गर्भावस्थामै पूर्ण रूपमा पौष्टिकतत्व प्राप्त गरेको बच्चा स्वस्थ जन्मन्छ र जन्मपछि पनि स्वस्थ रहन्छ...
भिटामिन डी कम भए स्तनक्यान्सरको जोखिम बढी
सामान्य घामबाट प्राप्त गर्न सकिने भिटामिन डीको कमी हुँदा महिलामा हुने प्रमुख रोग स्तनक्यान्सरको जोखिम हुने पाइएको छ । भिटामिन डी लेबल ठिक भएमा स्तनक्यान्सरको जोखिम घट्छ । भिटामिन डी मानव स्वास्थ्यका लागि चाहिने महत्वपूर्ण पोषणमध्येमा पर्छ । यसको...
चिसोमा देखिने रोगका घरेलु उपचार
जाडो मौसमको सुरुवातसँगै चिसोका कारण देखिने समस्या बढ्दै छन् । आयुर्वेद चिकित्सक वैकुण्ठ सुवेदीका अनुुसार ज्वरो, रुघाखोकी, दम, श्वासकाश, बाथ, जोर्नीको दुखाइ, पिनासजस्ता समस्या जाडो समयमा देखिने गर्छन् । चिसोका कारण देखिने यस्ता समस्याको उपचार स्थानीय रूपमा उपलब्ध खनिजपदार्थ...
किन चाहिन्छ क्याल्सियम ?
आवश्यक मात्रामा क्याल्सियमको मात्रा नपुगेमा मानव शरीरमा त्यसका विभिन्न असर देखापर्न सक्छन् । आवश्यक मात्रामा क्याल्सियम नभएमा मानव शरीरमा हड्डीसम्बन्धी विभिन्न रोग देखापर्ने गर्छन् । हाडजोर्नीलाई मजबुत बनाउन तथा मुटु स्वस्थ राख्नसमेत मानव शरीरमा क्याल्सियमको आवश्यकता हुन्छ । क्याल्सियमको...
मलाई धेरै मुटुरोगीले एउटा साझा प्रश्न सोध्ने गर्छन्– कुन खानेतेलले मुटुलाई फाइदा गर्छ ? धेरै मानिस खानेतेल, कोलेस्टेरोल र अन्य चिल्लो खाद्य पदार्थबारे भ्रममा देखिन्छन् । आजभन्दा केही वर्षअघिसम्म बजारमा मुख्य रुपमा तोरीको तेल मात्र पाइन्थ्यो । धेरैले तोरीकै...
बच्चाको स्वस्थ विकासका लागि ५ अत्यावश्यक पोषकतत्व
धेरै अभिभावकलाई बच्चालाई के खुवाउने तथा हुर्कने समयमा के अत्यावश्यक छ भन्नेमा दुविधा हुने गर्छ । बाल्यावस्था युवा तथा वृद्धावस्थाको आधार हो । सम्पूर्ण उमेर स्वस्थ रहन बाल्यावस्थामा केही पोषकतत्व अपरिहार्य हुन्छन् । बच्चाको सन्तुलित वृद्धि र विकासका लागि...
गोनोरिया एकप्रकारको साझा यौन रोग हो । यो ‘भिजेरिया गोनोरी’ नामक ब्याक्टेरियाका कारण लाग्ने गर्छ । यसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘भिजियस’ अथवा ‘युडियस’ भन्ने गरिन्छ । ‘भिजियस’ शब्द महिलाको हकमा लागू हुन्छ भने ‘युडियस’ पुरुषको हकमा । महिला तथा पुरुष...
मर्निङ वाक जानुपूर्व….
मर्निङ वाकका लागि निस्कनु शारीरिक अभ्यासको महत्वपूर्ण उपाय मात्र होइन कि, यो तपाईंको सम्पूर्ण दिनको सुरुवात तपाईं ‘आफ्ना लागि’ दिनु पनि हो, जुन दिनभर तपाईं नपाउन पनि सक्नुहुन्छ । मर्निङ वाकका लागि निस्कनुपूर्व सहजखाले पहिरन छनोट गर्न नभुल्नुहोस् ।...
किन सधैँ थकाई लागिरहन्छ ?
के तपाईंले कहिल्यै आफूलाई सोध्नुभएको छ, किन म सधैँ थकित हुन्छु ? यदि त्यसो हो भने यो लेख तपाईंका लागि समाधान बन्न सक्छ । यहाँ थकान महसुस हुने केही साझा करणहरूको चर्चा गरिएको छ, जसलाई तपाईं व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुन्छ...
के तपाईंको आँखा फरफराइरहन्छ ?
परापूर्वकालदेखि नै आँखा फरफराउनुलाई विभिन्न ढंगले अथ्र्याउँदै आइएको छ । सामान्यतया हाम्रो गाउँघरमा आँखा फरफराउनुलाई राम्रो या नराम्रोको पूर्वसंकेतका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । तर, चिकित्सकहरू आँखा फरफराउनुको कुनै राम्रो या नराम्रो घटनाको अग्रिम संकेतसँग कुनै सरोकार नरहेको बताउँछन् ।...
‘कति रक्सी खान मिल्छ ? महँगो रक्सी छ, खाऊँ कि नखाऊँ ?’
हालै विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रकाशन गरेको सूचनाका आधारमा विश्वमा २० मध्ये १ जनाको मृत्यु रक्सी सेवनसँग जोडिएको हुन्छ । रक्सीले विश्वभरि वर्षमा ३० लाख मानिसको ज्यान लिने गरेको छ । यस्तो भयावह चित्र हुँदाहुँदै पनि हरेक चाडपर्व, भोजभतेर, बिहेवारी,...
शरीरलाई हानि पुग्ने गरी चिल्लोपदार्थ बढेर तौल धेरै हुनु नै मोटोपन हो । शरीरको तौल (केजी) र उचाइ (मिटर) लिई बडी–मास इन्डेक्स (तौल/उचाइ स्क्वायर) निकालेर मोटोपनको अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ । बिएमआई १८.५ देखि २४.९ सम्म भएका सामान्य, २५...
विश्वमा धेरै मानिस मिर्गौलासम्बन्धी समस्याको सामना गरिरहेका छन् । यदि जीवनशैली र खानपानमा सावधानी अपनाउने हो भने यसबाट सजिलै बच्न सकिन्छ । शरीरलाई स्वस्थ र सक्रिय बनाउन मिर्गौलाले फिल्टरको रुपमा रगत सफा राख्छ । थाहा पाउनुस् मिर्गौलालाई स्वस्थ राख्न...
धेरै लामो समयसम्म मोबाइल चलाउँदा मोबाइलको रेडिएसनले मानिसलाई ठूलो रोगसमेत लाग्न सक्ने अनुसन्धानहरूले पत्ता लगाइसकेका छन् । आइसिएमआरको नयाँ अनुसन्धानले भने तपाईंलाई अचम्मित बनाउन सक्छ । अनुसन्धानको पहिलो चरणमा मोबाइन फोन धेरै प्रयोग गर्दा मानिसको शरीरभित्र जैविक परिवर्तन आउन...
नेपाली भान्सामा मसलाको रुपमा प्रयोग गरिने सुकुमेल स्वास्थ्यका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसले ग्यास्ट्रिकबाट रक्षा गर्छ, कोलेस्टेरोल तथा क्यान्सर नियन्त्रण गर्छ, मुटुसम्बन्धी समस्याबाट राहत दिन्छ र रक्तसन्चारमा सुधार गर्छ । यसका साथै यो दाँतसम्बन्धी रोग र मुत्रनली संक्रमणजस्तै...
१. मानवका लागि आनन्दपूर्वक जिउन वुद्धिविवेक, सम्पत्ति र स्वास्थ्य नभइनहुने भए पनि स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । २. सानातिना रोगव्याधि तथा समस्यासँग जुध्न सक्ने स्वास्थ्यस्थिति बनाउनुपर्छ । अर्थात्, मान्छेको रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता दह्रो हुनुपर्छ । ३. धूमपान स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै...
संयुक्त राष्ट्रसंघको २७ सेप्टेम्बरमा हुने तेस्रो उच्चस्तरीय बैठक नसर्ने रोगको रोकथाम र निवारणमा केन्द्रित हुने भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३औँ महासभामा बस्ने उच्चस्तरीय बैठक नसर्ने रोगमा केन्द्रित हुने राष्ट्रसंघले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा...
अमृतमय दूध, केसित पिउँदा बन्छ कुन रोगको औषधि ?
दूध मानिसको मात्र नभई सबै स्तनपायी जीवको पहिलो आहार हो । दूधलाई अमृतको रूपमा लिने गरिन्छ । धार्मिक र वैज्ञानिक दुवै दृष्टिले दूध मानव स्वास्थ्यका लागि अति लाभकारी छ । दूधको बहुउपयोगितालाई बुझेरै हुनुपर्छ, हाम्रा पूर्खाले सदियौँदेखि दूधलाई अति...
हाम्रो समाजमा, विशेष गरी हिन्दू धर्मावलम्बी, त्यसमा पनि अधिकांश महिलाहरू धार्मिक दृष्टिकोणले व्रत –उपवास) बस्ने गर्छन् । व्रतको मूल उद्देश्य देवी–देवतालाई खुसी बनाई परिवारमा सुख, शान्ति, समृद्धि भित्र्याउनु तथा पति, सन्तान र आफ्नो सुस्वास्थ्यका लागि वरदान प्राप्त गर्नु हुन्छ...
यी हुन् ग्रीन कफीका फाइदा
अधिकांश मानिसहरु तौल घटाउन र स्वस्थ रहन ग्रीन टी पिउछन् । तर के तपाईंलाई थाहा छ, ग्रीन कफी स्वास्थ्यका लागि ग्रीन टीभन्दा कयौं गुणा बढी फाइदाजनक छ । यसका फाइदा के–के हुन् थाहा पाऔं । तीब्र रुपमा तौल घट्छ...
माघ १४ बाट नेपालमा कोरोना खोप लगाउन सुरू गरिन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
आयुर्वेद स्नातक तहको लाइसेन्सिङ परीक्षा फागुनमा
विराट अस्पतालले भित्र्यायो नेपालमै पहिलोपल्ट मल्टिप्लेक्स पिसिआर मेसिन
सुदूरपश्चिममा कार्यरत १०७ स्वास्थ्यकर्मीको म्याद थप (नामावली सहित)
पार्किन्सन रोगबाट ग्रसित गायक ध्रुव केसीको निधन
यस्ता समस्या भएकालाई दिइँदैन कोरोना खोप
जाडोमा लिनुपर्ने सावधानीबारे डा. ओममूर्ति अनिलको १० सुझाव
यसरी ल्याइयो भारतले दिएको कोरोना खोप (फोटो फिचर)